Imiceli mngeni yokuPhuhliswa kweNtengiso enokuConjululwa ngezixhobo ze-Salesforce Dx
Isilimela 29, 2018 by U-Evans Walsh, Iimbono zizonke:
Ivenkile yokuthengisa yindawo yokuphuhliswa kwesicelo esekwe lilifu esetyenziselwe ukuphuhlisa ii -applectioning zokusebenza ezibalaseleyo zeshishini. Eli qonga linezixhobo ezininzi zokubonelela kubaphuhlisi. Phakathi kwezo zixhobo, abaphuhlisi banokukhetha iStoveforce Dx esijongwa njengesixhobo sophuhliso esigqibeleleyo nesingenamthungo. Esi sixhobo siza nezinto ezininzi ezikhethekileyo kunye neenzuzo ezahlukeneyo. Ukuze usebenzise esi sixhobo ngendlela efanelekileyo kwaye uvune zonke izibonelelo zayo, kubalulekile ukwazi izinto ezimbalwa ngesi sixhobo. Abasebenzisi bafumene imiceli mngeni yophuhliso ngeStoforforce. Abaphengululi basebenzisa iSalesforce Dx ukusombulula le miceli ngaphandle komthungo.
Kwicandelo elilandelayo, siza kuphonononga imiceli mngeni, esele isonjululwe ngeThengisaforce Dx, ngexesha lophuhliso lweStoforce.
Ukugrumba ii-Orgs kwenza ukuba kube lula ukwenza ii-Orgs ezintsha zoPhuculo
Xa kuziwa kwinkqubo yokuphuhliswa kwesicelo kunye neStoforforce, ii-orgs ziyafuneka zenziwe. Indlela yokwakha ii-orgs yayinengxaki ethile kwi-Salesforce kude kube kuziswa kwezixhobo ze-Salesforce Dx. Esi sixhobo senza inkqubo yokwenza ii-orgs zingabi buhlungu kwaye zingabi namthungo. Abo basebenzisa i-CLI, baya kuxhamla kuyo. Imiyalelo yomyalezo kufuneka isetyenziselwe ukuphuhlisa nokwenza ii-orgs. Abasebenzisi banokusebenzisa kwakhona amanqaku e-Github kwinkqubo yokuphuhliswa kwezicelo zomsebenzi wefu.
Uphuhliso oluqhutywa nguMthombo
Uninzi lwabaphuhlisi bakhetha inkqubo esekwe kumthombo wokuveliswa kwezinto ukuze bahlale behlelekile. Nangona kunjalo, ukwenza loo nto yayiyintlungu engaphambili. Abaphuhlisi kwafuneka benze ii-orgs ezintsha, emva koko kufuneka baqhubeke nenkqubo yophuhliso. Uphuhliso oluqhutywa ngumthombo alunazintlungu ngokuqaliswa kweThengisaforce Dx, njengoko inika ithuba lokuyila ii-orgs ngaphandle kokujongana nayo nayiphi na ingxaki. Enye into ephawuleka kukuba iStoforforce Dx inokwenza inkqubo yophuhliso ngokuzenzekelayo. Ngenxa yoko kunokubakho izibonelelo ezithile ngokuvumela incoko, ukunika umntu amandla iakhawunti, njl njl. Ukuze ufunde ngakumbi, unokujonga Flosum.com.
Inzuzo yokuDityaniswa ngokuqhubekayo
Abaqulunqi bezicelo bahlala befumana ukuba ukudityaniswa okuqhubekayo yinto ebalulekileyo kwinkqubo yophuhliso. Sisenzo esilula esenziwe uninzi lwabaphuhlisi kwezi ntsuku. Ukudityaniswa okuqhubekayo kwiSalesforce ngumceli mngeni, kwaye kulapho i-Salesforce Dx iye yavela njengesixhobo sokuguqula esongeze ixabiso ngakumbi kwiStoforforce njengeqonga lophuhliso. Ukuthengisa i-Dx kuvumela abasebenzisi ukuba benze inkqubo eqhubekayo yokudibanisa. Ngenxa yoko, ukusetyenziswa kokuphela kokuphela kokuphela kokuphela komdla kuba ngumtsalane kunye nokusebenza nzima.
Ukuqhutywa kovavanyo oluzenzekelayo
Kwinkqubo yokuphuhliswa kwesicelo, ukuvavanywa kwesixhobo kuvela njengenye yezona zinto zibaluleke kakhulu. Ukuvavanywa kubalulekile ngenxa yezizathu ezininzi. Ngaphandle kwesilingo, isoftware njengenkonzo ayinakubhengezwa ukuba inokusetyenziselwa abasebenzisi bokugqibela. Ukuqhuba inkqubo yokuvavanywa ngeSforforforce yayiyincwadana yemigaqo. Kodwa, inokwenziwa ngokuzenzekelayo ngesixhobo seSalesforce Dx. Ayigcini nje ukugcina ixesha, inkqubo ezenzekelayo inceda ekuboneni nasekucombululeni imiba okanye iimpazamo okanye iziphazamisi kunye nokusetyenziswa ngendlela echanekileyo.
Ndiyathemba ukuba, esi sithuba kwimiceli mngeni yokuphuhliswa kweStoforforce nge-Salesforce Dx iya kukunceda ufumane ulwazi olufunekayo. Ngolwazi oluthe kratya, bhalisa kwisiteshi sethu kwaye uqhubeke nokufumana uhlaziyo lwebhlog entsha.
U-Evans Walsh Juni 29, 2018
Olu ngeno yafakwa kwi Ishishini lokuthengisa izindlu noqhotyosho Uphuhliso lweNtengiso. Bookmark le Permalink.
Agasti 23, 2017 Unxibelelwano lweNtengiso yePropathi-esonaKhokelo sokuGqibela Unyaka nonyaka, amawaka eenkomfa zenethiwekhi zentengiso ziyenzeka. Kuxhomekeka kwi-niche yakho, nokuba usemgceni wolawulo lwepropathi yezorhwebo ethe kratya, okanye nokuba ukwamacandelo ophuhliso, kuya kubakho umsitho kunye neqela lonke labachwephesha abafanelekileyo kwi-niche yakho. Nalo naliphi na icandelo leshishini, okanye naliphi na ipolitiki elandelayo onokucinga ukuba iya kuba nemicimbi emininzi yenethiwekhi, eya kuthi incede ekucaciseni icandelo nasekusekeni […] exhonyiweyo Ishishini lokuthengisa izindlu
Agasti 14, 2018 Ukujongana njani nokuLawulwa komngcipheko kwishishini lokuthengiswa kwezindlu? Kukho imeko yezoqoqosho ethe gqolo ejikeleza kwihlabathi. Inqaku elinye ekuxoxwa ngalo lishishini lokuthengiswa kwezindlu. Ukuba ngumnini weshishini lokuthengiswa kwezindlu kubandakanya nemingcipheko emininzi. Nangona kunjalo, umntu kufuneka uhlale elumkile ukuze angangeni zingxaki. Kuyinyani ukuba kufuneka wenze yonke into ukuthintela umngcipheko onokuthi ungabi nakho ngalo lonke ixesha. Kodwa sinokuhlala sithetha ngeendlela ngeendlela zokujongana nobungozi kwishishini lokuthengiswa kwezindlu. Ngokuqulunqa iindlela […] exhonyiweyo Ishishini lokuthengisa izindlu
Februwari 6, 2017 Iiplatifomu ze-E-yorhwebo eziPhezulu ze-E-commerce yamashishini amancinci Abanini bamashishini abancinci namhlanje banethuba elilula lokuqhuba amashishini abo ngenxa yokuhambela phambili kubuchwepheshe. Nokuba baneemfuno ezahlukeneyo, ukulawula nokulungisa ishishini kukhawuleze kwaye kusebenze ngakumbi. Iinkqubo ezahlukeneyo ze-e-commerce ziyafumaneka, ezinokulungelelaniswa kwiimveliso kunye nohlahlo-lwabiwo mali lwabanini bamashishini. Ngaphambi kokuba siqhubeke, masiqale ngokuchonga ukuba umnini weshishini unokufuna ntoni. Xa uqala ukukhangela kumaqonga e-commerce, uya kudibana nezi […] exhonyiweyo Ishishini lokuthengisa izindlu
Oktobha 9, 2018 Ingayinceda njani iMbuyekezo ka-360 iShishini lakho? Uninzi lwemibutho iyakuqonda ukubaluleka kokubekwa kwengxelo kwindawo yayo yokusebenza. Baye baqonda ukuba banokukhula kuphela xa bengazi malunga nalapho banqongophele khona kwaye yintoni ekufuneka yenziwe ukulungiselela ukukhula. Xa kusenziwa ingxelo, ayisiyombutho kodwa ngabantu abathile abasebenza kwimibutho eyahlukeneyo. Kukho iindlela ezahlukileyo ezinje nge-360 degree degree ingxelo ezinceda imibutho ekufumaneni iindlela zokuzonwabisa malunga […] exhonyiweyo Ishishini lokuthengisa izindlu
Juni 20, 2018 Ukugcina imali yakho yeshishini? Baza kufuna ntoni abatyali mali? Ukuba ungumnini shishini, ofuna ukuqala ishishini elitsha, kuya kufuneka ujonge ezinye iingcebiso kunye neendlela ezinokukunceda ukuba uqhubeke. Ukuqala ishishini elitsha ngumsebenzi onzima kuba kubandakanya izinto ezininzi kunye neenkcukacha kunye nolwazi oluya kuyigcina. Kodwa ngokubanzi, ukuba unamathela kwisicwangciso esihle seshishini kunye neshedyuli elungileyo, izinto ziya kukusebenzela ngokulula. Enye yezona zinto zinzima yokwenza kukuba ukhusele into elungileyo […] exhonyiweyo Ishishini lokuthengisa izindlu
January 17, 2020 Iimpawu ezi-5 eziBalulekileyo zeNdawo yeofisi eQeshisiweyo Finding the right office space for your needs as an entrepreneur or a small business owner can be quite a challenge. However, there are certain features you should look for when searching. If you have never found it necessary to hunt for professional office space to lease, here are some pointers on the important features to be aware of. Royalty Free Photo 1. Property Management Is a Top Priority One of the most important factors when searching for office space would […] exhonyiweyo Ishishini lokuthengisa izindlu